China mkpuchi mkpuchi mkpuchi rụpụta na ụlọ ọrụ | Akwa Ugbo
Kpọọ Anyị: +86 18521763668
Ọgụgụ isi Manufacturing
Ntọala R & D
Mmiri Dabere nrapado (Jigsaw gluu)
Water Based nrapado N'ihi Softwood Woodworking
Water Based nrapado N'ihi Ọkara Hardwood Woodworking
Water Based nrapado N'ihi Hardwood Woodworking
Water Based nrapado N'ihi Ike Hardwood Woodworking
Ọcha Board Bonding
Mkpokọta mkpuchi mkpuchi Mgbakọ
Bgbọ njem Board Refrigerated
Mgbochi ákwà ihe owuwu
Interiorchọ Mma Ime Obodo Rail
Steel Metal Structure Ihe Bonding
Materialgbọ mmiri Ihe Njikọ
Fire gosiri Door ihe onwunwe Bonding
Nchọpụta Nsogbu Zoro Ezo
Ndị ọchụnta ego
Water Based nrapado
Polyurethane nrapado maka mkpuchi osisi bonding
Koodu: F201 usoro
Isi ihe siri ike 100: 25/100: 20
Gluing usoro: ntuziaka scraping / igwe Rolling
Mbukota: 25 KG / gbọmgbọm 1500 KG / ịkpụ rọba
Youxing Shark na-elekwasị anya na ngwa ọhụrụ nke mkpuchi mkpuchi na ịchọ mma teknụzụ njikọ. O tinyela aka na bọọdụ ndị mejupụtara dịka bọọdụ polystyrene gbasaa (EPS board), bọọdụ polystyrene a na-akpọpụta (XPS board), osisi ajị ajị anụ, polyurethane foam foam, na bọọdụ jikọtara ọnụ. Enwee ike ịchekwa ihe ịchọ mma, perlite, ciment ụfụfụ mkpuchi ihe na ihe ndị ọzọ na ụkpụrụ nke ikpuchi ọkụ, ike, mmiri na nguzo ihu igwe na teknụzụ ihe owuwu ọtụtụ afọ, ma na-aga n'ihu na-agbanwe ma zụlite ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa ahịa ma hazie ngwaahịa maka ndị ahịa.The okwu dị mfe nghọta nke mkpuchi mkpuchi osisi bụ bọọdụ ejiri maka mkpuchi ụlọ. Mkpuchi mkpuchi bụ osisi plastik siri ike nke polystyrene resin dị ka akụrụngwa tinyere ihe ndị ọzọ na ihe ndị nwere poly. A na-eme ka ọ dị ọkụ ma gwakọta ya mgbe ị na-agbanye ọgwụ, wee wepụta ya ma kpụzie ya. Ọ nwere mmiri na-egosi na arụmọrụ mmiri. Belata ọkpụrụkpụ nke envelopu ụlọ ahụ, wee si otú a na-abawanye ebe eji eme ụlọ.
ewu mputa mgbidi dị n'èzí
metal panel, calcium silicate osisi, nkume, seramiiki mpempe akwụkwọ, wdg
nkume ajị anụ, ụfụfụ osisi (EPS, XPS), extruded board, ezigbo gold board, wdg.
XPS mkpuchi osisi
XPS mkpuchi osisi bụ osisi siri ike na-eme ụfụfụ nke polystyrene resin dị ka akụrụngwa tinyere ihe ndị ọzọ na ihe ndị nwere poly, na-ekpo ọkụ ma jikọta ya na catalyst n'otu oge, wee wepụ ya ma kpụzie ya. Aha sayensị ya bụ ụfụfụ polystyrene (XPS) maka mkpuchi ọkụ. XPS nwere nkpuru osisi mechiri emechi emechi emechi emechi, nke na enye ohere ka ogwe XPS nwee obere mmiri nke oma (ihe na-achoghi mmiri ya) na obere mmezi ihe. , Nnukwu nrụgide na-eguzogide ọgwụ, ịka nká (ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịka nká na-ejikarị arụ ọrụ).
Polyurethane mkpuchi osisi
Polyurethane ihe nwere ulo oru porosity Ọdịdị na bụ ihu ọma a mechiri emechi-cell Ọdịdị, nke ọ bụghị nanị nwere magburu onwe kwes mkpuchi arụmọrụ, kamakwa nwere ezigbo ifriizi-nzube ka ha meworo na ụda absorption. Ogologo ndụ nke usoro ihe mkpuchi ihe mkpuchi polyurethane na-enweghị ike iru ihe karịrị afọ 30 n'okpuru iji ya na ọnọdụ ndozi. N'okpuru ọnọdụ eji eme ihe n'oge ndụ nke ihe owuwu ahụ, ihe owuwu ahụ agaghị emebi emebi n'okpuru akọrọ, iru mmiri, ma ọ bụ electrochemical corrosion, nakwa n'ihi uto nke ụmụ ahụhụ, fungi ma ọ bụ algae, ma ọ bụ mmebi site na òké na ihe ndị ọzọ dị na mpụga.
Ingfụfụ na-agba agba
Foamfụfụ ụfụfụ bụ -40%, ọ na-enwekwa ụfọdụ ndochi mmetụta na isi ihe na ogbenye porosity na ala flatness.
Igwe ahụ na-apụta ma ọ ghara ihichapụ gluu (mbadamba ntụpọ).
Oge ihu igwe siri ike
Enwere ike iji ihe nkedo mee ihe ogologo oge, nguzo ihu igwe nke ngwaahịa a na-agbaso ụkpụrụ JG / T396.
Njikọ dị elu
Ọ nwere ike hụ na mbadamba agaghị ịgbawa na degummed mgbe bonding. Ike ọdụdọ ≥0.15Mpa (okwute ajị anụ jikọtara ọnụ).
Nzọụkwụ 01 Elu nke mkpụrụ kwesịrị ịdị larịị ma dị ọcha.
Flatness ọkọlọtọ: + 0.1mm elu ga-adị ọcha, mmanụ-free, akọrọ na mmiri-free.
Nzọụkwụ 02 Ruru nke nrapado dị oké egwu.
A na-egbu ọrụ ndị na-akwado ndị isi na-acha ọcha (na-acha ọcha) na ndị na-agwọ ọrịa (aja aja aja) nha anya, dị ka 100: 25, 100: 20
Nzọụkwụ 03 Kpoo gluu nke oma
Mgbe agwakọtara onye isi na onye na-agwọ ọrịa, gbanye ngwa ngwa, ma jiri onye na-emegharị ihe na-eburu gel ugboro atọ na-enweghị mmiri mmiri na-acha nchara nchara. A ga-eji ngwakọta agwakọta mee ihe n'ime minit 20 n'oge ọkọchị na minit 35 n'oge oyi
Nzọụkwụ 04 Ọkọlọtọ nke ego
(1) 200-350 grams (ihe eji eji ire ụtọ eme ihe: dị ka mbadamba osisi, bọọdụ ụfụfụ, wdg)
(2) 300-500 grams maka nnyefe (ihe nwere polayer na-atụ egwu: dị ka ajị anụ nkume, ụgbụgbọ mmanụ a andụ na ihe ndị ọzọ)
Nzọụkwụ 05 Oge zuru oke
Ekwesịrị itinye bọọdụ glued n'ime minit 5-8 ma tinye ya n'ime nkeji 40-60. Oge nrụgide bụ awa 4-6 n'oge ọkọchị na oge awa 6-10 na oge oyi. Tupu nrụgide ewepu, nrapado kwesịrị isi gwọọ ya
Nzọụkwụ 06 Ike zuru ike mkpakọ
Nrụgide nrụgide: 80-150kg / m², nrụgide ga-edozi.
Nzọụkwụ 07 Wepụ obere oge mgbe i gbusịrị ya
Ọnọdụ ọgwụgwọ ahụ dị elu karịa 20 ℃, a ga-arụkwa ya n'ụzọ dị nro mgbe awa 24 gachara, a ga-edozi ya nke ọma mgbe awa 72 gachara.
Nzọụkwụ 08 Ekwesiri ịsachasị gluing ngwa ngwa
Mgbe ejiri gluu ahụ kwa ụbọchị, biko hichaa ya na dichloromethane, acetone, thinner na ihe mgbaze ndị ọzọ iji zere ikpuchi ezé ndị a madoro anya ma metụta ego nke gluu na otu nke gluu.
Nke gara aga: Bgbọ njem Board Refrigerated
Osote: Ọcha Board Bonding
60lọ 601, Iwuli 10, 1628 Lane,
Okporo ụzọ Jinshajiang, Shanghai
Video magburu onwe ya